Vaovao - Ahoana no hisorohana ny harafesina fotsy amin'ny makarakara vy tafo
Ny fitsaboana amin'ny tarehy dia ampiasaina amin'ny famokarana vy vilia. Ny vy galvanizedvilia dia atsoboka ao anaty vahaolana asidra chromic mba hamorona sarimihetsika manify eo ambonin'ny sosona zinc. Na dia tapaka kely aza ny sarimihetsika chromate, dia levona ao anaty rano ny chromate eo amin'ny manodidina ny tapaka ary miangona amin'ny fiatoana ary mamorona sarimihetsika vaovao indray. Izany dia manakana ny famokarana harafesina fotsy. Asio menaka ny vy galvanisévilia mba hisorohana ny fifandraisana mivantana eo amin'ny rivotra sy ny zinc. Mariho foana fa ny menaka dia tsy maintsy mamafa ny ambonin`ny vyvilia alohan'ny hosodoko. Raha ny vy galvanizedvilia dia ampiasaina amin'ny fandokoana, azo tsaboina amin'ny hoditra * mihinana. Ny * mihinana dia hifikitra tsy tapaka amin'ny tampon'ny vy vyvilia, mamorona faritra malalaka sy porous izay hanome toerana tsara ho an'ny loko hifikitra.
vy galvanisé vilia tokony hotehirizina amin`ny toerana tsara ventilated aorian`ny famokarana. Na mampiasa lafaoro fanamainana na fanamainana mba hisorohana ny condensation amin'ny vanim-potoanan'ny hamandoana be sy ny fahasamihafana lehibe eo amin'ny hatsiaka sy ny hafanana. Amin'izao fotoana izao i Wan dia tsy afaka mando amin'ny asitrika. Raha lena ny ando na ny rano, dia tokony ho maina, ary ny fonosana dia azo esorina sy tsofina maina amin'ny alalan'ny faneva. Voatahiry ao amin`ny tsara ventilated toerana, raha ny mari-pana fahasamihafana eo amin`ny mangatsiaka sy ny mafana, mora ny hitranga izay tokony hialana ny ando.
(1) Stainless vy vilia mba hanao ny sasany ambonin`ny fitsaboana, toy ny mamela ny ambonin`ny mba hamorona manify sarimihetsika, araka izany, mba hamorona malalaka porous rafitra, mba hampilamina ny ambonin`ny asa famafazana loko.
(2) Ataovy ny Stainless vy vilia amin'ny toerana mangatsiatsiaka sy ventilated, ialao ny hamandoana sy ny orana, raha ilaina, dia azo atao ny fepetra fiarovana amin'ny tany.